यौनसम्पर्क कन्डम प्रयोग र आकस्मिक गर्भ - यौन मनोविज्ञान - साप्ताहिक
- डा.बालकृष्ण शाह
म २० वर्षीया अविवाहित जागिरे महिला हुँ । म कहिलेकाहीं यौनसम्पर्क गर्छु । यसरी यौनसम्पर्क हुँदा कन्डम प्रयोग गर्न लगाउने गरेकी छु, तैपनि पछिल्लो दुई महिना देखि मेरो महिनावारीमा समस्या आएको छ । महिनावारी भएको १० दिनमै फेरि बाक्लो रगत जाने तथा धेरै सेतो पानी जाने समस्या थपिएको छ । के यो गम्भीर समस्या हो ?
यौनसम्पर्क गर्दा कन्डम प्रयोग गर्नु राम्रो कुरा हो । यसले गर्भ रहनबाट मात्र होइन, यौनरोगहरूबाट समेत जोगाउँछ । तपाईंको प्रश्नबाट आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की (आईकन) प्रयोग गरे–नगरेको कुरा स्पष्ट हुँदैन ।
गर्भनिरोधक चक्की राम्रोसँग प्रयोग नगरेको वा आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग गरेका कारण पनि महिनावारीमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ । १०–१० दिनमा रगत जाने भन्दा पनि कति रगत जान्छ त्यो महत्वपूर्ण मानिन्छ । थोपा–थोपा रगत जाँदैमा आत्तिनु पर्दैन, तर धेरै रगत जान्छ भने त्यसको कारण पत्ता लगाएर उपचार गराउनुपर्छ ।
त्यस्तै धेरै सेतो पानी जानुको कारण यौन संक्रमण हुन सक्छ, तर अलि–अलि सेतो पानी जानु सामान्य हो । तपाईंको समस्या सजिलै निको पार्न सकिने भएकाले चिन्ता लिनु पर्दैन । एकपटक स्त्रीरोग चिकित्सकसँग परामर्श लिनुहुन आग्रह गर्छु ।
सुरक्षित यौनमा गएको पोखरा सिटी
सालीको उक्साहटमा कन्ट्रयाक्ट किलर प्रयोग गरी श्रीमतीको हत्या
योनि कसरी कसिलो बनाउने
सुरक्षित यौनमा गएको पोखरा सिटी श्रावण २३, २०७६
बाँझोपनको आशंका श्रावण १६, २०७६
प्रेम र रतिरागमा पश्चिमाहरू श्रावण १५, २०७६
सम्बन्धमा के गलत हो ? श्रावण ९, २०७६